‘कृ’ अभिनेत्री अदितीको साथमा किन छुट्दिनन् उनकी आमा ?
१२ फाल्गुण २०७५, आइतवार | Feb 24, 2019 | 10:43:00
By radiojanakpur on	 January 26, 2018 देश, मनोरञ्जन
माघ १२ – माघ २६ बाट प्रदर्शनमा आउन लागेको सिनेमा ‘कृ’ अभिनेत्री अदिती बुढाथोकी यतिबेला सिनेमाको प्रचार प्रसारमा व्यस्त छिन् । सिनेमाको प्रचार प्रसारमा रहेकी अदिती प्रायः ठाउँमा आमाको साथमा पुगेकी हुन्छिन् । केही दिनअघि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समेत उनी आमा–बुवासँगै पुगेकी थिइन् । तर अन्य कलाकारहरुले भने यसरी आमा बुवालाई साथमा ल्याएको खासै देखिँदैन । हामीले अदिती र उनकी आमासँग यही विषयमा गरेको कुराकानी :
तपाईँ आमासँगै हिड्नुको कारण के हो ?
एक्लै किन जानु भनेर ममीलाई साथीको रुपमा लिएर हिँड्ने गर्छु ।
‘कृ’को गीतको लागि स्कटल्यान्ड जाँदै हुनुहुन्छ । साथमा आमा पनि जानुहुन्छ ?
जानु हुन्न ।
तपाईँसँग छायांकनको क्रममा कहाँ–कहाँ पुग्नु भएको छ आमा ?
सूटको बेलामा भने खासै ममी आउनु भएको छैन ।
आमाले बुटिक सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । तपाई कत्तिको जानुहुन्छ ?
बुटिक कहिलेकाहीँ जान्छु ।
आमाले नोटिस नगरेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने कुरा के छ जस्तो लाग्छ ?
छैन । मैले सबै कुरा भन्छु ।
एउटै छोरी आइटी पढ्नु भएको छ । सिनेमा क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ । त्यस बाहेक आमाबुबाको केही अपेक्षा थियो की थिएन ?
थिएन । ममी–बाबा निकै सपोर्ट गर्ने खालको हुनुहुन्थ्यो । मलाई भारत जाउँ भनेर पनि ममीले नै भन्नु भएको हो । ममीलाई मैले यो क्षेत्र चुन्दा मन परेको छ ।
नेपालसँगै भारतमा पनि सकृय हुनुहुन्छ । नेपाल र भारतमा छायांकन गर्दा के–के भिन्नता पाउनुभयो ?
फरक त छ यहाँ र उता । तर, यहाँ मेरो टिम राम्रो भएर पनि मलाई त्यस्तो गाह्रो भने भएन । पारिवारिक माहोल थियो । सुरेन्द्र दाई र भुवन अङ्कल निर्माता निर्देशकभन्दा पनि आफ्नो दाई जस्तो हुनुहुन्थ्यो ।
‘कृ’ छायांकनमा गाह्रो–साह्रो त्यस्तो केही परेन ?
विहान उठ्नुपथ्र्यो त्यही हो गाह्रो । तर कलाकार भएको हिसाबले त्यति गर्न परिहाल्यो । सामान्यतया हामी ७–८ बजे उठ्छौँ । तर सूटको बेलामा राती तीन बजे नै उठ्नु पथ्र्यो । त्यही माथि चिसो ठाँउमा गाह्रो हुन्थ्यो ।
बाल्यकालमा तपाईंलाई बदमासी गरेको अथवा काम बिगारेको याद छैन ?
त्यस्तो बदमासी गर्न कहिल्यै पनि मन लागेन । मेरो साथिहरु पनि त्यस्तो बदमास गर्ने खालका थिएनन् । त्यो भएर पनि होला । म सोझो छु । खै किन किन ?
सोझो मान्छेलाई सिनेमा क्षेत्रमा गाह्रो छ भन्छन् नी ?
त्यस्तो केही पनि होइन । त्यो त एउटा भनाई मात्र हो । त्यस्तो भन्दैमा सबै अभिनेता अभिनेत्रीहरु बदमास मात्र हुन्छ र ? अभिनय गर्नको लागि आफ्नो क्यारेक्टर नै परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामी क्यामेराको लागि पो परिवर्तन हुने हो त ! वास्तविक जीवनको लागि त हैन नी ?\_
पढाईमा तपार्ईंले कहिले पिटाइ खानुभयो की भएन ?
खाएको छु । स्कुलमा हुँदा होमवर्क नगरेकोे कारण ।
आइटी पढ्नुभएको छ । यसमा कहिले काम गर्नुहुन्छ ?
हेर्दै जाउँ के हुन्छ । विस्तारै काम गरिन्छ होला नी !
तपाईँलाई प्राय भिडियोमा कम बोल्नुभयो भन्ने कमेन्ट आउँछ त्यस बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मेरो कमबोल्ने बानी छ । बिस्तारै बोल्ने प्रयास गर्नु छु ।
‘कृ’ को बारेमा दर्शकलाई के भन्न चाहानुहुन्छ?
हाम्रो सिनेमा रिलिज हुँदै छ । सिनेमा राम्रो बनाउन हामीले सक्दो मेहनत गरेका छौँ । यो सिनेमाले नेपाली सिने जगतलाई उच्च स्थानमा पुर्याउन खोजेको छ । सिनेमा हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु ।
अदितीको आमा पुष्पासँगको कुराकानी:
प्राय छोरीको साथमा हिँड्ने गर्नुहुन्छ नी किन ?
उसलाई म भयो भने काम गर्न अलि ढुक्क महसुस हुन्छ त्यही भएर पनि हो । अनि म आफैँलाई पनि आफ्नो बच्चा हो जाऊँ–जाऊँ जस्तो लाग्छ ।
सहजता कै लागि छोरीको साथमा हिँड्नुभएको हो कि अरु नै केही कारण छ ?
त्यस्तो केही पनि होइन । अदिती मुम्बई गएर बस्दा म केही समय उसँग बसेको छु । पछि बीच मा आउँदै जाँदै गरेँ । अनि यहाँ छायांकन हुदाँ भने नजिक–नजिकको ठाउँमा गएँ । उसले खाने कुरा पनि बाहिरको खान्न । अनि माछा मासु पनि खान्न । त्यो हिसाबले पनि म उसँग हुन चाहन्छु ।
अदिती सानोमा कस्तो खालको बच्चा ?
हाम्रो परिवार कै चकचक नगर्ने बच्चामा पर्छ । मैले छोरी भनेर भनेको होइन । तर, उ सानैबाट शान्त स्वभावको हो । उसले कहिल्यै पनि हामीलाई दुःख दिएको थाहा छैन ।
कुनै सम्झना छ सालिन हुँदाहुँदै पनि अलिकति बढी नै दुःख दिएको ?
छैन त्यस्तो केही पनि । बरु हामीलाई अलिकति बदमास भए हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्थ्यो । अरु बच्चा हेर्दा ऊ शान्त स्वभावको थिई नि त त्यसैले । हामीलाई कतै बाहिर निस्कियोस बदमासी नै गरी भने मान्छे बाठो हुन्थ्यो कि लाग्थ्यो । धेरै नै सोझी भई कि जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई ।
प्राय घरमा बस्दा अदितिले के गर्नुहुन्थ्यो ?
आफ्नो कामहरु छ भने गर्ने । अनि खान मन लाग्यो भने खाने । तर सानो–सानो कुरा पनि सोधेर गर्ने बानी छ ।
अदितीको पहिलो सिनेमा रिलिज हुँदै छ । तपाईले ट्रेलर हेर्नुभयो । कस्तो लाग्यो ?
ट्रेलर राम्रो लाग्यो । जति हेर्छु त्यति राम्रो लाग्छ ।
तपाईले अदितिको पहिलो पल्ट के हेर्नुभएको थियो ?
मैले पहिलो पटक विज्ञापन हेरेको थिएँ । अनि मैले उसको म्यूजिक भिडियो हेरेको थिएँ । मुम्बैमा पनि म उसको विज्ञापन सूटमा सँगै जान्थे । त्यो पनि हेरेको थिएँ ।
छोरीले छायांकन गरिरहेको हेर्दा कस्तो अनुभव भयो ?
उसको घान्द्रुकमा सूट हुदाँ म गईन । मेरो घरको एक जना बहिनी सँगै जानु भएको थियो । म त नजिकै भएको छायांकनमा गएको थिए । म जति ठाउँमा गए त्यहाँ उसको सूटको धेरै पार्ट थिएन । पहिला हामीले हेर्दा अर्काको यो मिलेन त्यो मिलेन भन्न जति सजिलो हुन्थ्यो तर आफ्नो बच्चा नै त्यहाँ भएपछि कति गाह्रो हुन्छ भनेर थाहा पाएँ । धेरै दुख हुने रहेछ । हामीले सोचेको जस्तो नहुने रहेछ ।
अदितीले यो चाहिँ काम नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको कुनै काम छ ?
त्यस्तो केही लागेको छैन । किनभने उसले गरेका प्राय काममा अरुले जस्तो क्यारेक्टर दिएको हुन्छ उसले त्यही निभाउनु पर्ने हुन्छ ।
सिनेमा रिलिज अघि अदितीको सुन्दरताको प्रशंसा भईरहेको छ । कता–कता उहाँको जोडी कस्तो हुने भन्ने पनि हल्ला चलिरहेको छ । तपाईँलाई कस्तो ज्वाई होस भन्ने ईच्छा छ?
जसको बुबा आमालाई पनि उसको सन्तानको जीवन साथी बुझ्ने होस भन्ने हुन्छ । सबै कुरा चाहेको जस्तो हुन्न । अन्त्यमा जे लेखेको छ त्यही हुने हो । चाहना भने राम्रो होस भन्ने हुन्छ ।
धेरै ठाँउमा अनमोल अदिती एक अर्काको लागि परफेक्ट भन्ने सुनेका छौँ । तपाईलाई आमाको रुपमा उनीहरुलाई सँगै देख्दा कस्तो लाग्छ ?
यस्तो कुरामा मैले भनेर पनि केही हुदैन । म यो विषयमा केही भन्नै सक्दिन । गसिप त हरेक किसिमको आउँछ नि । त्यसलाई मैले त्यस्तो ठूलो रुपले भने सोच्दिनँ ।
छोरीको पहिलो सिनेमाको बारेमा दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मेरो छोरीको यो पहिलो सिनेमा हो । उसले गरेको कतिकाम राम्रो होला भने कतै कमी कमजोरी पनि होला । सबै जनाले हेरिदिनु होस् । माया दिनुहोस भन्न चाहन्छु । सकारात्मक र नकारात्मक कुरालाई सुधार्दै उसलाई अघि बढ्न सहज हुन्छ । तर कतिपय कुराहरु हामी नबुझी जर्ज गर्छौँ । नजानेर कसैको बारेमा भन्नु गलत हो ।
-गफगाफ डटकमसँग उज्यालोको सहकार्य